Nezvedu - Ningbo Younghome houseware Co., Ltd.
Kambani yedu yakavambwa kwemakore mana uye iri fekitori inotarisa pane hookah dhizaini uye hookah yekunze. Iyo fekitori ine 1,400 mativi emamirimita emashopu uye vashandi makumi manomwe. Hunhu hwedu ndeye dhizaini yekugadzirisa kugona uye nekukurumidza kutsva kwezvigadzirwa zvitsva. Parizvino, yakashandira makambani mazhinji e-commerce shisha uye ikavaunzira zvigadzirwa zvitsva.
Isu tinobatanidza kukosha kukuru kune pfungwa yechigadzirwa dhizaini, uye kuramba tichiongorora musika wevatengi kuti vagadzirise. Tine vechidiki dhizaini timu iyo inounza iwe kwakasiyana-siyana uye kusiyanisa mhinduro kubva muitiro kuziva kusvika kurongedza maitiro. Chero bedzi iwe uchipa zano, isu tichazviona kupfuura zvinotarisirwa.
Uye zvakare, isu tine yakazara uye yehunyanzvi yemhando yekutarisa timu iyo ichapa vatengi ne100% yakazara yekuongorora masevhisi uye inogona kupa vatengi nemanyorero emhando yekutarisa yekutumira mishumo. Isu takashandira vazhinji hombe-e-commerce vatengi. Isu tine yakakwana-yekumira mhinduro kubva pakugadzira zvigadzirwa kusvika kurongedza kudzivirira kukanganisa kwezvinhu. Mutengo wevatengi wekugutsikana wakanyanya kwazvo.
Yakazara Yekuongorora Services
Kunyangwe iwe uri mucherechedzo, wekutengesa kana wekuparadzira, iwe unogona kugara uchiwana mhinduro inokodzera iwe!
Iwe unogona kutitumira isu kubvunza maererano neruzivo rwekufonera pawebhusaiti, uye isu tinokupindura mukati mezuva rimwe chete. Pamusoro pezvakagadzirwa pawebhusaiti, isu tinogona kupa maitiro.
Chero bedzi iwe uchipa vanodhirowa kana masampuli, tinogona kugadzira izvo zvakafanana zvigadzirwa kwauri. Panguva imwecheteyo, tinotsigira dhizaini yakavhenganiswa, unogona kusanganisa bhodhoro rako raunofarira uye hooka pamwe chete, uye gadzirisa mavara akasiyana.
Kana iwe usiri kuda kuodha mashoma pakutanga, mazhinji ezvigadzirwa zvedu arimo, saka unogona kutanga nediki & musanganiswa odha. Isu takagadzirira kukurudzira mhando-dzakatengwa-mhando kwauri maererano nemusika wako.